Rivotra fitaterana - Rosiana rehetra ireo Mpisolovava eto! Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Na izany aza, misy fitsipika dia maningana
Eo anivon ny tena fatra-paniry laza karazana entana fitaterana an'habakabaka entana no tena fomba fijery satria amin'izao fotoana izao izany no fomba haingana indrindra ny fandresena lavitraNy orinasa manao ny rivotra entana ny mibahan-toerana sy ny oversized cargoes. Izany dia hita miharihary fa ny vidin'ny air entana dia miankina mivantana amin'ny entana antsipiriany: ara-batana, ny toetra, ny fampiharana sy ny fiarovana haavon'ny. Ka antsoina manokana cargoes mitaky avy amin'ny mpanjifa ny hanolotra ny iray fonosana ny antontan-taratasy (ho natao niaraka tamin'ny orinasa manam-pahaizana manokana amin'ny toe-javatra rehetra), ary avy amintsika manokana ny fitaterana ho takiana. Fitsipiky ny fitaterana ny rivotra entana dia hentitra voafehin'ny sy iraisam-pirenena rosiana ny lalàna ary koa ny fomba feno kokoa ny fanaraha-maso ny dingana rehetra izany fanompoana izany dia ilaina, manomboka avy araka ny fanaterana ny mpanjifa mandra-mandalo fanaraha-maso ny fomba amam-panao amin'ny fahatongavany any amin'ny firenena hafa. Na izany aza, ny rehetra voalaza etsy ambony amin'ny tsy misy fomba vokatry ny laza iraisam-pirenena air entana satria ny tahan'ny foana hamarinina noho ny vidy ny entana sy ny teny ny fanaterana. Azafady, niantso anay ary fenoy ny teny fampiharana ao amin'ny tranonkala-toerana amin'izao fotoana izao ka mba hianatra ny vola sy ny toe-javatra ny rivotra entana ho an'ny entana haingana araka izay azo atao. Kajy ny rivotra entana cost maka ny ora ao amin'ny tena raha hifandray aminay amin'ny alalan'ny finday. Amin'izao fotoana izao izany dia tsy azo sary an-tsaina miroborobo raharaham-barotra tsy fiaramanidina. Ny orinasa lehibe no efa tsy omby intsony ny firenena sisintany izay efa nisy namorona, na aiza na aiza misy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena. Matetika, amin'ny fanatanterahana misy large-scale tetikasa, ny ampahany ilaina singa dia atao amin'ny zorony iray izao tontolo izao, ny ampahany hafa - amin'ny teny hafa, ary ny assemblage - ao amin'ny fahatelo. Inona no azontsika atao mba tonga saina ny tetikasa ao amin'ny toe-javatra toy izany? Tsara, manararaotra ny iraisam-pirenena rivotra ny fitaterana. Iraisam-pirenena rivotra cargoes fitaterana mitondra ny elanelana misy eo amin'ny firenena na inona na inona, araka izay rehetra fanaterana ny fotoana dia amin'ny roa ora.
Raha maika iraisam-pirenena cargoes fitaterana eo ny fanontaniana, dia tsy misy fanontaniana ny rivotra cargoes ny fitaterana.
Ny very andro amin'ny fitaterana ny tena ilaina dia ny fitaovana, ny antontan-taratasy, simba ny sakafo dia mety ho goavana eo amin'ny very ho an'ny orinasa amin'ny hoavy. Izany no antony iraisam-pirenena rivotra transportations dia be malaza sy manan-danja ny ankehitriny ny raharaham-barotra. Rivotra ny fitaterana dia mety ho ny zandriny indrindra, ny lafo indrindra sy haingana indrindra ny karazana fitaterana. Izany no ampiasaina, ohatra, amin'ny alalan'ny rehetra delivery orinasa tsy an-kanavaka mba hanafaka ny zava-dehibe, maika ny antontan-taratasy sy ny fifandraisana mba efa misy toerana ho an izao tontolo izao. Ny safidy ny rivotra transportations dia ny nanonona ny antony ny hamehana ny entana delivery, ary midika izany ny maha-zava-dehibe sy ny vola. Entana lafo amin'ny ankapobeny ny fepetra tsara logistician tsy afaka ny tsy firaharahiana. Mora vidy ny entana dia tsy mahasoa ho an'ny tena lafo ny fitaterana amin'ny lehibe dia lehibe lavitra. Entana toy izany ao amin'ny toerana fotoana dia hiseho ho noncompetitive noho ny halafon'ny vidiny. Noho izany, ny fotoana ho an'ny kajikajy ny fanaterana dia very na inona na inona. Tsara logistician tsy manam-bola lafo toy izany! Manan-danja hafa fepetra ny entana dia ny ara-batana, toetra. Izy ireo dia haben'ny, ny lanjany, ny boky, fitahirizana manokana ny toe-piainana, ny fitaterana na ny famindrana. Izany dia hita miharihary fa toratelo fahaiza-manao ny mpitondra entana efitra dia voafetra ao anaty fiaramanidina. Noho izany, ny rivotra transportations dia tena saro-pady ny ny lafiny, ny boky sy ny lanjan'ny entana. Amin'ny famantarana toy izany ny vola lany amin'ny fitaterana cargoes dia tombanana amin'ny alalan'ny kg. Ho an'ny ohatra, ny fitaovana ara-miaramila na ny lehibe mitovy habe rafitra natao ho sarotra hanatratra toerana.
Noho ny tsy mahazatra toy izany ny toe-javatra misy tsara tarehy air mavesatra-adidy, toy ny 'IL' na"Ruslan - N".
Rivotra transportations ny cargoes mitovy tanteraka amin'ny mpandeha rivotra transportations amin'ny alalan'ny fitsipika sy ny fenitra, sy ny hafa-mahay manavaka. Tsy hiezaka ny hahatsiaro azy ireo, tsotra izao ny manilika ny olana ny fitaterana an'habakabaka ny fitaterana orinasa Trans VIP. Ny mpitantana dia afaka mifidy ny tsara tariff ny rivotra transportations ho roa, ny orinasa lehibe sy ny olona tsy miankina, nivoaka avy entana ny boky, isan-karazany ny fiaramanidina, ny lanja, ny lalàna ny firenena vahiny. Raha rivotra transportations manerana an'i Rosia sy Eoropa nitsitsy fotoana, transatlantic rivotra transportations fotsiny ny filàna. Rehefa mampiasa ny ranomasina transportations, dia afaka mandany amin'ny hatramin'ny volana ho an'ny fanaterana ny vokatra avy amin'ny firenena iray hafa. Rehefa mampiasa ny rivotra transportations - ka hatramin'ny ora. Manan-danja ny fahasamihafana eo amin'ny fotoana, sa tsy izany? Ny maha samy hafa ny vidiny dia latsaka be. Ny fianjeran'ny fiaramanidina"cargo"lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao dia MANAN- na Ruslan. Noho izany, inona no azontsika ianarana momba ny rivotra transportations? Izy ireo dia haingana on delivery ampy fanononana tsy ampy, fa koa tena lafo vidy. Izany dia mety ho tena lafo ny fitaterana ny lehibe mitovy habe na mavesatra cargoes amin'ny rivotra. Ny mahazatra cargoes ho an'ny rivotra fitaterana ireo antontan-taratasy, ny serasera, ny kely, nefa lafo ny entana, simba ny entana na fananana mitaky maika delivery. Isaky ny seranam-piaramanidina no manana ny fomba amam-panao trano fanatobiana entana izay cargoes tonga dia hahazo rehefa avy ny fiterahana sy mampidina entana. Fomba amam-panao mpanakalo ao ireo trano fanatobiana entana, dia tsy manome marina ny fisoratana anarana ny cargoes amin'ny addressee ao amin'ny fomba amam-panao heviny. Aorian'ny fisoratana anarana ny fomba amam-panao ny fomba arahina sy ny fombafomba, ny fandoavana ny hetra mifanaraka, entana dia omena ny consignee, voalaza ao entana antontan-taratasy. Ao ny rivotra transportations ny antsoina hoe Airwaybill - pananahana-dalana ny volavolan-dalàna ny iraisam-pirenena levitra no ampiasaina ho toy ny zato tany (ny antontan-taratasy famantarana ny fitaterana miasa ary misy ny vaovao momba ny consignee). Fisian'ny famelana ny tahirin-kevitra, ny fahatsapana ny fitsipika manokana ny manokana cargoes ny fitaterana, ny fisian'ny indrindra fa mahefa sy mahay manam-pahaizana manokana ao amin'ny orinasa - dia kely fotsiny lisitry ny fepetra fototra ny fikambanana mifototra amin'ny rivotra fiterahana ny avy-of-hijerena cargoes. Amin'izao fotoana izao amin'ny dingana toy izany ny anarany dia heverina ho ny iray amin'ireo indrindra cost-monina sy ny asa-mandevona.
Noho izany out-of-hijerena cargoes rivotra ny fitaterana dia nanatanteraka ihany no matihanina ny orinasa iraisam-pirenena rivotra transportations tsena.
Hanomboka amin'ny aoka ny fanamarihana inona ny teny hoe out-of-hijerena cargoes rivotra ny fitaterana dia midika hoe. Rivotra fitaterana ny toy izany baiko hoatran'ny fitaterana ny tsy ho azo hozongozonina fanorenana, fitaovana manokana, lehibe traktera, menaka fitaovana, isan-karazany ny orinasa fitaovana sy ny milina, fantsona sy ny lehibe mitovy habe ny zava-drehetra. Out-of-hijerena cargoes rivotra ny fitaterana dia mitaky be dia be ny fahalalana sy traikefa avy amin'ny fitaterana orinasa, afa-tsy, izany no tena tsara mba manana fifandraisana akaiky amin'ny isan-karazany ny fikambanana izay afaka manome entana fanohanana raha ilaina, indrindra indrindra dia tsy ho tafahoatra ny manana traikefa mahomby ny fahazoana ny antontan-taratasy ilaina any no MIPETRAKA sy ny hafa avy amin'ny fanjakana ny fikambanana. Rivotra transportations ny avy-of-hijerena cargoes mitaky ny fitandremana ny fitsipiky ny fifamoivoizana ny Federasiona rosiana sy ny isan-karazany fepetra arahana ny Ministeran'ny Vonjy taitra Fepetra - rehefa afaka izany rehetra izany dia ilaina mba hanafaka out-of-hijerena cargoes amin'ny seranam-piaramanidina, sy ny fiterahana, dia matetika no nanatanteraka amin'ny lalana ny mponina an-tanàna amin'ny sehatra maro. Nandritra ny fitaterana ny toy izany cargoes izany dia ilaina ny mahatsiaro fa indraindray ianao mba indemnify ny toetry ny fahaverezana ataon'ny maotera fitaterana ny lalana fanorenana sy ny tara nandrakotra ny arabe. Tsy isalasalana fa, toy izany transportations no azo hanatanterahana tsy manokana ny tahirin-kevitra ary ny fahazoan-dàlana avy amin'ny rafi-panjakana.
Nivoaka avy amin'ny karazana entana ary ny sasany hafa masontsivana, ny fahazoan-dalana ho an'ny tokan-tena-dalana, ny fitaterana, ny entana na ny fahazoan-dalana ny iray voafetra ny teny izay tsy afaka mihoatra ny telo volana dia tsy ho namoaka.
Iraisam-pirenena ho an'ny out-of-hijerena cargoes rivotra transportations isan-karazany ny sehatra mety. Amin'izao fotoana izao dia misy ny lehibe isan-karazany izy ireo.
Izy ireo dia optimum ho an'ny ankamaroan'ny out-of-hijerena cargoes (ohatra ny lehibe mitovy habe ny fanorenana fitaovana, ny indostria fitaovana, sns.): sehatra-trailers, misokatra ny sehatra sy ny manokana ny fitaterana fitaovana ilaina amin'ny milina ho an'ny famindrana, ny fitaterana sy fampidinana cargoes.
Amin'izao fiaramanidina IL- sy ny fanovana, indrindra IL-TD manana ny be isan-karazany ny sidina sy ny enta-mavesatra ny - taonina no ampiasaina ho an'ny rivotra delivery ny cargoes. Koa, ny fiaramanidina fitaterana AN- 'Ruslan' dia ampiasaina ho an'ny rivotra transportations. Milina io dia tsara ho an'ny fitaterana ny avy-of-hijerena cargoes amin'ny rivotra. Noho izany dia azo atao ny toerana maotera ny fitaterana ao amin'ny andalana ao amin'ny efitrefitra, izay midika fa ao anatin'ny fiaramanidina dia azo atao ny toerana na ny lehibe sy ny mavesatra indrindra cargoes. Ny avo lenta ny fahalalana ity karazana asa mamela ny mpanjifa mba mahay fizaham-pahasalamana tao amin'ny fomba amam-panao lalàn'ny Federasiona rosiana. Isika dia liana amin'ny fanomezana tsara service sy tsy tapaka manaraka ny fanovàna ny didy amam-pitsipika ara-dalàna ny asa ny fomba amam-panao sy ny Lalàna momba ny Hetra, izay mamela ny hampahafantatra ny ilaina fanampiny ho tahirin-kevitra.
Mitondra Ny Fiara ao Rosia - Masoivohon'i ETAZONIA Ambasady ao Rosia